Posted by သုတရသအဖွာဖွာ on March 21, 2019
977E8281 6C3A 4D37 A2BE 854AAC8C820B
ကိုဝမ်း ရဲ့ Post လေးထဲက စိတ်မကောင်းဘွယ်ရာသွေးကင်ဆာခံစားနေရသောဝေဒနာရှင်လေးကို တွေ့လိုက်ရပြီး ဒီနေ့ဖတ်မိခဲ့တဲ့ကင်ဆာနဲ့ ကညွှတ် ပတ်သက်နေပုံလေးကို စိတ်ဝင်စားမိခဲ့ပါတယ်…
အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…ငွေအကုန်အကျလည်း သိပ်မများတာမို့ ဒီဆေးနည်းလေးကိုမူရင်းအတိုင်း မျှဝေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. မူရင်း…..
Asparagus…..whether U believe it or not ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မေလ်းတစ်ခုကို ကျွန်တော့် အကို တစ်ယောက်က ပို့လိုက်ပါတယ်။
သူလည်းသူများဆီက ရလို့ ကျွန်တော့်ဆီကို forward လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူခေါင်းစဉ်လိုဘဲ ကညွှတ်များတဲ့ -ယုံခြင်ယုံမယုံခြင်နေ…ဟုတ်မဟုတ်တော့်မသိဘူး…ကိုယ်တိုင်လည်းမဆန်းဖူးလို့ပါ။
ဟိုးဖက်အစွန်ဆုံးကတော့ white asparagus (မြန်မာလိုမသိ)သူ့အတိုင်းဘာသာပြန်တော့ ကညွှတ်ဖြူပေါ့၊ အလယ်က green asparagus မြန်မာလိုကညွှတ် သူ့အတိုင်း ဆို ကညွှတ်စိမ်း ဒီဖက် အစွန်ဆုံးကတော့ wildasparagusသူတိုင်းဆို ကညွှတ်ရိုင်းဖြစ်ပါတယ်
။နှစ်ပေါင်းကတော့ နည်းနည်းကြာသွားပြီ လူတစ်ယောက်ကကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အတွက်ကညွှတ်ပင်လိုက်ရှာနေတာ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်
။ပြီးတော့ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်လဘာထုတ်ကင်ဆာဂျာနယ်ကနေ မိတ္တူကူးထားတဲ့စာရွက်တစ်ရွက် ကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့တယ်။
စာရွက်ကအကြောင်းအရာကတော့ Asparagus for cancer (ကင်ဆာအတွက် ကညွှတ်များ)ဆိုတဲ့ အကြောင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဝေမျှခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ ဇီဝဓါတု ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ Richard R.Vensal, D.D.S ရဲ့ ရှာဖွေချက်တွေကနေ ကညွှတ်ကနေ ကင်ဆာရောဂါကုသနည်းကို သင်ယူခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ သူရဲ့ပရောဂျက် လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလဲ သူနှင့်အတူတကွ လုပ်ကိုင်ခဲ့သလိုကျွန်တော့မှာ စုဆောင်းထားတဲ့ ကညွှတ်ကနေ
ကင်ဆာရောဂါကုသပျောက်ကင်းသွားတဲ့ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ ….. ၁/- လူတစ်ယောက်ဟာ သွေးကင်ဆာဖြစ်တာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီး ဗုံးဗုံးလဲ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကညွှတ်ကထုံးနဲ့ တစ်နှစ်ကုသအပြီးမှာတော့ဆရာဝန် စစ်ဆေးကြည့်တာ ကင်ဆာရှိကြောင်းမပေါ်လာတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံး သူဟာပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။
၂/- အောင်မြင်နေတဲ့ အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ်စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဟာဆီးကြိတ်တည်တဲ့ ကင်ဆာကို ခံစားနေရတာ ၁၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တော်တော်ကြာကြာ ဆေးကုသခြင်း ဓါတ်ကင်ခြင်းတို့ ဖြင့်ကုသခြင်းပြုခဲ့သော်လည်း တိုးတက်လာခြင်းမရှိပါဘူး
။နောက်ဆုံး၃လအတွင်းကညွှတ်ကုထုံးနဲ့ကုပြီးနောက်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဆီးကြိတ်များဟာပျောက်သွားပြီးကျောက်ကပ် နှစ်ခုဟာ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်နေတာဆေးစစ်တဲ့အဖြေမှာ တွေ့ခဲ့ရ
ပါတယ်။၃/- လူတစ်ယောက်ဟာ အဆုတ်က
င်ဆာ ခံစားနေရပါတယ်။၁၉၇၁ မတ်လ ၅ရက်နေ့မှာကုသဖို့ ခွဲစိတ်ခဲ့ရာမှာတော့ရောဂါဟာ အလွန်ရင့်ပြီးအမြစ်များဟာ တော်တော်ပြန့်နေတဲ့အတွက်ခွဲစိတ်လို့မရ ခဲ့ပါဘူး။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ ပြန်ပြီးချူပ်ပေးခဲ့ကာ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ထိုလူနာဟာ ကညွှတ်ကုထုံးကို ကြားပြီး ချက်ချင်း ကုသမှု့ခံယူခဲ့ပါတယ်။
သြဂုတ်လမှာတော့ ဓါတ်မှန်သွားရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှကင်ဆာလက္ခဏာပြနေတာတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီး အရင်အတိုင်း အလုပ်ပြန်လည် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြုလုပ်နည်း….. ကညွှတ်ကို သစ်သီးဖျော်စက်ထဲထည့်ပြီး အရည်ဖြစ်ကြောင် ကြိတ်ပါ။ထိုကညွှတ်ရည်ကို ရေခဲ့သေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး လူနာအားတစ်ခါတိုက်လျှင် စတီးဇွန်းဖြင့် ၄ ဇွန်းကိုမနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်တိုက်ပါ။
** ကညွတ် နှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး **
ကညွတ်ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် စားသုံးကြတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းဖြစ်စေ၊ အမျိုးမျိုး ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်စေ စားလေ့ရှိကြပြီး ဘယ်လိုစားစား အရသာထူးတဲ့ အသီးအရွက်တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကညွတ်မှာ Folate ၊ ဗီတာမင် K ၊ သံဓာတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် အထူးသင့်တော်ကောင်းမွန်ပြီး နှလုံးရောဂါနဲ့ အရိုးပွရောဂါတို့ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗီတာမင် E ၊ နိုင်ယာစင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင် B6 နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်း အနည်းအကျဉ်းစီ ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ကညွတ်ဟာ အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝတဲ့အပြင် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရတာလည်း လွယ်ကူလှပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် အများစုဟာ စားသောက်နေထိုင်မှု ပုံမမှန်တဲ့အတွက် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ အဝလွန်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါအချို့ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ဒီရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရည်၊
ဆံကေသာနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတို့ကို တိုးမြှင့် ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
1. သန္ဓေသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုခြင်း
ကညွတ်မှာ Folate ဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကြီးထွားမှု မြန်ဆန်နေတဲ့ အချိန်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ မွေးခါစကလေးငယ်တွေနဲ့ ကြီးကောင်ဝင်စ လူငယ်တွေအတွက် အထူးပင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
2. စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို လျော့ကျစေခြင်း
ကညွတ်မှာ ပါဝင်တဲ့ Folate ဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Homocysteine ဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး စုပုံမလာအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို နည်းပါးစေပါတယ်။
3. နှလုံးကို ကျန်းမာစေနိုင်ခြင်း။
အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ Homocysteine ဓာတ်ဟာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
4. အရိုးပွခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
Vitamin K ဓာတ် လျော့နည်းခြင်းဟာ အရိုးကျိုးခြင်းကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကညွတ်ဟင်းတစ်ခွက် စားခြင်းဖြင့် ဗီတာမင် K တစ်နေ့တာ လိုအပ်ချက်ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာကြောင့် ကယ်လ်ဆီယမ်
စုပ်ယူမှုကို များစေပြီး ဆီးထဲ ကယ်လ်ဆီယမ် စွန့်ပစ်မှုကို နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကညွတ်မှာ ပါဝင်တဲ့ သံဓာတ်က အရိုးနဲ့ အဆစ်အမြစ်တွေကို သန်မာစေနိုင်ပါတယ်။
5. ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
Folate ဓာတ်နည်းပါးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နှုန်း များစေနိုင်ပါတယ်။ Folate ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးသူတွေမှာ အူမကြီးကင်ဆာ၊
အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ ပန်ကရိယကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
6. အစာခြေနှုန်း မြန်ဆန်စေခြင်း
ကညွတ်မှာ အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ရေဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဝမ်းရှင်းစေတဲ့အတွက် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ြခင်းကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်ဟာ ဝမ်းမှန်စေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များကို သည်းခြေရည်နဲ့ ဝမ်းမှတစ်ဆင့် စွန့်ပစ်ပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျှင်ဓာတ်ဟာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အဝလွန်ရောဂါနဲ့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းရောဂါတချို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။